Maktabadda Qaranka oo dib loo dhisayo - BBC Somali
Maktabadda Qaranka oo dib loo dhisayo
19 Disembar 2013
Image caption Waa sida ay u ekaan doonto marka la dayactiro
Magaalada Muqdisho waxaa maanta looga dhawaaqay in la furi doono Maktabaddii Qaranka oo ku burburtay dagaalkii ka dhacay Soomaaliya horraantii 1991.
Xaflad lagu maamuusayay mashruucan dib loogu dhisayo maktabadda ayaa waxa laga sheegay in hadda la hayo ilaa labaatan kun oo bug, qaar badan oo kalena la filayo.
Maamulaha Mashruuca Saynab Xasan, ayaa BBC u sheegtay in la dareemay baahida dadku ay u qabaan maktabad, iyada oo sheegtay inay jiraan kumanaan ardey Soomaaliyeed oo aan heysan meel ay ka helaan buugaag.
Image caption Maktabadda waxay ku burburtay dagaalladii sokeeye
Fikradda in dib loo dhiso Maktabadda Qaranka waxa ay ka timid Machadka Daraasaadka ee Heritage, iyada oo ay gacan ka geysanayaan dowladda Soomaaliya, ganacsatada iyo qeybaha bulshada sidii dib loogu dayactiri lahaa dhismaha, waxaana dayactirka iyo qalabeytu qaadan doonta muddo lix bilood ah.
Dhismaha Maktabadda ayaa waxay hoy u ahayd qoysas Soomaaliyeed oo dhawaan dowladdu ay ka saartay.
Maqal Qabanqaabada xafladda dhaarinta madaxweynaha Somaliland
Qabanqaabada xafladda dhaarinta madaxweynaha Somaliland
Maqal Maxaa lagaga hadlayaa shirweynaha xisbiga Zanu PF?
Maxaa lagaga hadlayaa shirweynaha xisbiga Zanu PF?
Maqal Qabanqaabada xafladda dhaarinta madaxweynaha Somalialnd
Qabanqaabada xafladda dhaarinta madaxweynaha Somalialnd
Maqal Wareysi Sacuudiga oo laga ogolaanayo Shineemooyinka
Wareysi Sacuudiga oo laga ogolaanayo Shineemooyinka
Maqal Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirka dalxiiska adduunka
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirka dalxiiska adduunka
Maqal Qaar kamid ah reer Mandera oo walaac ka muujiyay garoon diyaaradeed oo halkaasi laga dhisayo
Qaar kamid ah reer Mandera oo walaac ka muujiyay garoon diyaaradeed oo halkaasi laga dhisayo